तिथि मेरो पत्रु » एक महान् चुम्बन को रहस्य
एक महान् चुम्बन को रहस्य
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: सेप्टेम्बर. 23 2020 |2मिनेट पढ्न
चुंबन मजा छ र यो सही गरिन्छ जब, झिल्काहरू उड हुनेछ र तपाईं आफ्नो साथी अवाक छोड्छ. तर तपाईं अर्को स्तर गर्न आफ्नो चुंबन लिन्छन् कसरी? तल, हामी एक ठूलो चुम्बनले को रहस्य अनावरण छन्.
रहस्य #1: छेडो
ताल्चा लगाउन ओठ अघि तंग गर्न समय लिएर प्रत्याशा निर्माण गर्न मदत गर्छ. चाहे यो हात पकड गर्नुपर्छ, caressing, वा पीठ संगतिमा, वास्तविक चुम्बनले अघि यो शारीरिक सम्पर्क जडान प्रगाढ संग साझा जुनून साथ तीव्र मदत गर्नेछ भन्ने रहस्य छ.
रहस्य #2: आराम
चुंबन, तपाईं एक सय पटक चुम्बन गरेका छन् भने पनि, एकदम स्नायु चालाकी हुन सक्छ. प्रमुख आराम गर्न छ. गहिरो सास फेर्न सम्झना, आफ्नो मन हलुको, र आफैलाई विश्वास.
रहस्य #3: ओठ
चुंबन भन्दा अन्य आफ्नो ओठले कुराहरू के. चूसने वा बिस्तारै आफ्नो साझेदार ओठ nibbling यौन तनाव संग पागल तिनीहरूलाई ड्राइव को लागि सुनिश्चित हुनेछ. अर्को ओठ-केन्द्रित प्रविधी आफ्नो ओठ मा हल्कासित आफ्नो जिब्रो को टिप चलान छ. आफ्नो चुंबन टिप्न हुँदा, चुंबन दबाब र गति अलग आफ्नो साथी अर्को आउँदै छ के थाहा छैन हुनेछ उत्साह सिर्जना गर्न मदत गर्छ.
रहस्य #4: कान, नाक, आँखा, र घाँटी
सामान्यतया तपाईं ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ मात्र ठाउँ छैन भनेर ओठ वरिपरि केन्द्रित छ चुंबन गर्दा. आफ्नो साझेदार कान चुंबन, जाँच, नाक, र परेलिहरु सबै रोमान्टिक आनंद मा एक साधारण चुम्बनले बारी मदत. तपाईं एक निशान यो कदम गर्न चाहनुहुन्छ भने, आफ्नो कानको लोति र घाँटी काट playfully प्रयास. यी विशेष स्पट नयाँ उत्तेजना र भावना पैदा Teasing आफ्नो आसन्न चुम्बनले को जोश र तीव्रता थप हुनेछ कि.
रहस्य #5: भावना
माथि रहस्य मदत गर्न सक्छ जबकि ठूलो kisser मा जो कोहीलाई, सबै को सबै भन्दा ठूलो रहस्य आफ्नो भावनात्मक राज्य र आफ्नो साथी जडान मा निहित. आतिशबाजी हेर्न क्रम मा चुंबन जबकि, आफ्नो प्राणको प्रत्येक अन्य कुरा गर्न छ. घनिष्ठ कथाहरू र सम्झनाहरु साझा गरेर, डर र महत्त्वाकांक्षी, र दे आफ्नो साँचो भावनाहरू देखाउन गहिरो स्तर आफ्नो सम्बन्ध लिन सबै तरिका हो. यस नयाँ गर्दा, भावनात्मक राज्य तपाईं कमजोर बनाउन हुनेछ, यो कुरा लायक हुनेछ कि एक जोखिम हो.
चुंबन तिनीहरूले तपाईं मतलब सिर्फ कति आफ्नो विशेष कसैले देखाउने एक सुन्दर तरिका हो. यी रहस्य संग, यस घनिष्ठ कुराले तपाईंलाई इच्छा छ कि गहिरो सम्बन्ध मा आफ्नो सम्बन्ध परिवर्तन गर्न सक्छन्.
4 कारण एक प्रोफाइल फोटो प्रेम लागि तपाईंको खोज सुधार हुनेछ
5 दिनुस् साँचो सोचता त्यो डेटिंग बारे मिथ्या
विवाहको बिन्दु के छ?